Augustin Andriamananoro:VOASAMBOTRA TENY ITAOSY -
AccueilRaharaham-pirenenaAugustin Andriamananoro:VOASAMBOTRA TENY ITAOSY
12/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ela nitoratorahana ka nahavoa voamason’angatra. Raha mbola afaka niery nandritra ny volana maromaro sy fotoana naharitra taorian’ny fanambaran’ny jeneraly Florens Rakotomahanina, lehiben’ny CIRGN, ny faramparan’ny volana Septambra teo, amin’ny tsy maintsy hisamborana azy ilay mpikambana sady lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny antoko mpanohitra Mapar, Augustin Andriamananoro, voasambotra ihany ny tenany. Ny sabotsy 9 Desambra teo, teny Itaosy, no nanatanterahan’ny Emmo-sécurité ny fisamborana ity mpikarama an’ady sady mpanakorontana firenena avy amin’ny Mapar ity. Noraisim-potsiny teny am-pandevenana ny rafozany Ingahy Augustin Andriamananoro tamin’izany. Mbola afaka nandevina soa aman-tsara aza ny tenany tamin’io andro sy fotoana io fa tsy nitovy velively tamin’ireo mpanao politika hafa toa an’i Marc Ravalomanana, izay tsy afa-nandevina ny rafozany ihany koa, i Didier Ratsiraka, tsy afa-nandevina ny rahalahiny, i Tantely Andrianarivo, tsy afa-nandevina ny reniny, ary i Maharante Jean de Dieu, tsy afa-nandevina ny rainy sy ny reniny mihitsy.
Tamim-pilaminana tanteraka tsy nisy herisetra kosa anefa no nanatanterahan’ny mpitandro ny filaminana ny fisamborana ity mpanakorontana firenena sy ny saim-bahoaka ity. Diso be, araka izany, ny vaovao naelin’ny televiziona sy radio sasantsasany tamin’io sabotsy io tamin’ny filazana fa nampiasa hery ny Emmo-sécurité tamin’ny fisamboarana an’ity minisitra tamin’ny fitondrana Tetezamita ity. Nentin’ny Emmo-sécurité tany Miarinarivo avy hatrany i Augustin Andriamananoro taorian’ny fisamborana azy mba hatao fanadihadiana lalina sy am-pilaminana.
Nisy didy fampisamborana…
Anisan’ny nampanano sarotra ireo mpitandro ny filaminana tamin’ny fanatanterahana ny asa fisamborana kosa tamin’io fotoana io ny fitangoronan’ireo fianakavian’Ingahy Augustin Andriamananoro nanodidina azy. Nitabataba izy ireo fa tsy nisy akory ny didy fampisamborana azy. Tsy adala akory ny fitsarana ary tsy kentrina ihany koa ny Emmo-sécurité amin’ny fanatanterahana ny asany. Matoa namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana ity mpikambana eo anivon’ny Mapar ity, misy antony ao, raha tsy hitanisa afa-tsy ny “Raharaha Soamahamanina”, izay nampiteraka korontana sy naharatrana mpiara-belona. Nitarika sy nampirisika ny olona hikomy tamin’ny alalan’ny fihetsiketsehana maro isan-karazany ihany koa.
Tsy vitan’izay fa raha olom-pirenena marina sy madio fo i Augustin Andriamananoro, nipoitra izy tamin’ny fampanantsoan’ny zandary tamin’ny fotoana saika hanaovana fanadihadiana azy. Maninona no nitsoaka sy tsy nipoitra anefa ity mpikamban’ny Mapar ity tamin’ireny fotoana ireny? Mahatsapa ny fahadisoana nataony matoa tsy nilentika nandritra ny fotoana maharitra ary niafina hatrany.
Ankoatra izay, tsy ny “Raharaha Soamahamanina” ihany no azo hanenjehana an’i Augustin Andriamananoro fa teo ihany koa ny dosie lehibe mikasika ny nananganany sy nahavitany ilay trano miezinezina be eny Faliarivo, izay tena manjavozavo tanteraka amin’ny besinimaro ny lalam-bola tamin’izany. Ela ny ela ka voasambotra ihany ingahy Augustin Andriamananoro. Andrasana ny tohin’ny raharaha.